Shiinaha Miis casri ah oo casri ah oo lagu barto qorista buug-gacmeedka loogu talagalay carruurta Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Yifan
ASTAAMAHA 1 Khaanad, 1 xabbo oo leh albaab
QIIMEYNTA SHARCIGA 120/140 / 160x60x75cm
Waxaa lagu dhisay iyadoo maskaxda lagu hayo, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ilaaliso nidaamka iyo abaabulka xafiiska gurigaaga. Muujinta qoto dheer ee desktop, 50 / 60cm, golaha wasiirada ee qoto dheer ayaa guriga ugu fiican ka dhigaya dukumiintiyadaan gaarka loo leeyahay. iyo fur buugaagta furan, oo ku siinaya meesha ugu fiican ee aad ugu dhaadhacdo barashada, qorista, ama shaqada ganacsiga.
Maadadu waa MDF iyo guddiga walxaha, heerka E1, waxay u hoggaansamaan heerka ilaalinta deegaanka ee badbaadada. Dusha sare ee dahaadhka melamine, oo leh caabbinta dabka iyo xoqidda ka-hortagga, waa wax aad u xiran.
Waxaa jira 3 cabir oo la heli karo, midka yarna waa 100x50x75cm, kan buugaagta lagu qoro waa 80x24x60cm, mid dhexdhexaadka ah waa 120x60x75cm, cabirka buugaagta 100x24x60cm, kan ka weyn waa 120x60x75cm, buugaagta sheyga waa 120x24x60cm, dhererka guud waa 135cm oo leh shelf cube.
Waxaa jira 2 cabir oo ah shelf cube, mid wuxuu la socdaa 5 xabbo, midna waa 7 xabbo, halkaas oo aad ku ridi karto faylal, waraaqaha, dukumiintiyada gaarka loo leeyahay, waxaa jira kabadh qoto dheer oo lagu hayo. Mid kale, shelf waa la hagaajin karaa, jihada toosan, ama hoos u dhacayaa, markaa waad dejin kartaa si aad ugu haboonaato baahiyahaaga.
Midabada guud waa geed iyo walnut, oo leh 1 khaanad iyo 1 albaab oo midabkiisu cad yahay.
waxaan isticmaalnaa qalab tayo sare leh, orodyahano bir ah oo siman, fiiq-jilicsan oo jilicsan.
Alaabtayada waxaa loogu talagalay carruurta, keydinta, iyo maskaxda lagu xiran karo waxaana loo dhisay inay la qabsadaan isticmaalka maalin kasta.
Xaqiiqdii waa wax weyn oo lagu kordhiyay qolkaaga jiifka ama xafiiska guriga.
Waxyaabaha qoryaha: guddiga walxaha
1drawer, 1 albaab, 1 buug-gacmeed
shelf hagaajin karo. Oo leh 5/7 xabbo
Is-uruurin - 2 qof ayaa lagu taliyay
Dammaanad-bixiyaha 3-sano ee Maunfacturer
Cabbirka H135, W100 / 120, D50 / 60cm
Awoodda xamuulka ugu badan ee miiska 15kg
Si fudud loo soo ururiyo
Hore: Miiska kombuyuutarka casriga ah ee xafiiska guriga
Xiga: Miis kombuyuutar qoraal fudud oo is haysta ah oo loogu talagalay xafiiska guriga
7 khaanado u qoraya miiska kombiyuutarka xafiiska guriga ...